Patrice Evra Oo Ka Tagey Marseille Iyo Eufa Oo 7 Bilood Ganaaxday
Home » Africa » Patrice Evra Oo Ka Tagey Marseille Iyo Eufa Oo 7 Bilood Ganaaxday
Patrice Evra ayaa kaga tagay kooxda Marseille is af-garad dhex maray waxaanay xidhiidhka kubadda cagta qaarada Yurub ee magacooda loo soo gaabiyo UEFA ka ganaaxeen 7 bilood kadib dhacdadii uu madaxa kaga laagay mid kamid ah taageerayaashii kooxdiisa.
Ciyaaryahankan hore ee kooxaha Monaco, Manchester United iyo Juventus difaaca uga ciyaari jiray, oo 36 jir ah, ayay Uefa ganaax saartay ilaa bisha June 2018 ka ah, taariikhdaas iyo bishaas oo ah ta uu ku ekaa heshiiska uu kula joogay kooxda Marseille.
Isagoo kamid ah ciyaaryahanada ka qayb galaya tartanka Europa League heerkiisa group yada, Evra Ayaan awoodeen inuu tartanka koox kale u safto xataa haddii aan cunaqabayn la saari lahayn.
Waxa kale oo Evra lagu xukumay inuu bixiyo ganaax lacageed oo dhan 10,000 oo lacagta Yurub ah (£8,829).
Evra ayaa Madaxa laag kaga kiciyey taageere garoonka cidhifkiisa taagan, kulankii horyaalka Europa League ku tirsanaa ee kooxdiisu 2 dii bisha November la ciyaartay naadiga Vitoria Guimaraes.
Laaga Evra ayaa sida ay ku warantay warbaahintii goob jooga ahayd, waxa uu yimid, xili uu ku dhex jiray ciyaaryahano kaydka ah oo isu diyaarinayay inay ciyaarta galaan, kuwaas oo ordayay garoonka dacalkiisa, waxaanay taageerayaasha qaarkood oo garoonka hoos ugu soo daadegay, soona daba istaagay, boodhadhka xayaysiiska ee garoonka ku wareegsani, ay bilaabeen inay aflagaado u geystaan ciyaaryahanka.
Aflagaadadan ayaan ahayn sida la xaqiijiyey mid ku shuqul lahayd wax jinsi ama midab takoor ah, balse waxay ku eedaynayeen qaab ciyaareedka liita ee ciyaaryahan, waxaana la sheegay inay lahaayeen ” Waxaad tahay qashin, kooxda faa’iido uma lihid, Evra waa inaad na dhaaftaa.”
Markii ay in ka badan hadaladaas ku celceliyeen, ayuu u dhaqaaqay xagooda si uu ula hadlo, balse xaalku wuu is bedel, xanaaq ayaana yimid iyo inuu mid kamid ah, laag kala eegto madaxa.
Difaacyahanka reer France wuxuu kooxda Marseille kaga soo biiray dhinaca naadiga Juventus bishii January 2017, taas oo uu saddex xili ciyaareed ku qaatay kadib markii ay kala soo wareegtay kooxda Manchester United.
“Heshiis is af-garad kadib, Marseille iyo Evra waxay go’aan kuwada gaadheen in la soo gunaanado qandaraaskii ka dhaxeeyey,” ayaa lagu yidhi, war-saxaafadeed rasmi ah oo kooxdu soo saartay. “Heshiiskii ciyaaryahanku kula joogay naadiga, ayaa si rasmi ah loo soo gaabiyey sii socoshadiisa kadib isbedel deg-deg ah oo dhacay.”
Filed in Africa France Horyaallada Wararka Maanta
Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings – Full Highlights | Nov 7 | 2017-18 NBA Season
Imisa Jeer Ayuu DHaawacmay Gareth Bale?